Global Voices teny Malagasy » Torohevitra isankerinandro ho anao momba ny fanoratana: : Aza atao tsinontsinona ny fandalinana ataon’ny governemanta Shinoa amin’ny fanehoankevitry ny daholobe ety anaty aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Jona 2019 5:23 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika nirinandrea
Manambatra ireo fomba fanoratana sy fanaovana tatitra tsara indrindra ao amin'ny Global Voices ny Weekly Writing Tips (Torohevitra isankerinadnro momba ny fanoratana). Ho entin'i Oiwan , mpamoaka lahatsoratra ho an'i Azia Avaratra Atsinanana, ho anao ny torohevitry ny volana Oktobra
Voalohany, vitan'ireo milina mpanivana ny mamafa anaty minitra vitsy fanehoankevitra iray manakiana ahitàna teny manohintohina ara-politika. Faharoa, vitan'ireo mpanivana ihany koa ny manafina ny lahatsoratra navoakan'ny olona iray tsy ho hitan'ny daholobe ary tsy mila milaza amin'ilay tompony. Fahatelo, raha misy mpampiasa aterineto, na lahy na vavy, mamoaka zavatra tsy azony porofoina ny fahamarinan'izany, azo ampangaina ho mpanely tsaho anaty aterneto ny tenany. Fahefatra, ireo mapnefa saimbahoaka tena tsy miankina kokoa dia nahazo fampitahorana ary “tambatambazana”, ny taona 2013, olo-malaza maro no nalaina baraka ampahibemaso tamin'ny fisamborana sy fanamelohana maro toy ny fanohanana ara-bola fihetsiketsehana  na fivarotantena  .
Ny tatitra lasa lavitra indrindra momba ny hevitry ny daholobe ety anaty aterneto izay mety ho hitanao an-tserasera dia nosoratan'ireo mpandalina rakitra karamain'ny governemanta. Tombanana  ho yuan an-tapitrisa no lanian'ny governemanta Shinoa amin'ny fampiasàna mpandalina ny hevitry ny daholobe ho “fikojakojana ny filaminana”. Mahazo alalàna miditra amin'ny angon-drakitra anaty aterneto ireny mpandalina ireny mba hanoratany ny tatitrany.
Ny sasany amin'ireny tatitra ireny dia antontan-taratasy niparitaka, toy ilay tatitra momba ny ezaka fanefena ny hevitry ny daholobe tao amin'ny Akademia Yenching , izay nozarainy ho an'ireo mpikambana anatin'ny antoko tao aminy ihany, izay tomponandraikitra amin'ny fandrindrana ilay fanefena ny hevitry ny vahoaka. Hita anatin'ireny tatitra ireny ny torohay sarobidy mampahafantatra mazava ny fomba hikirakiran'ny governemanta sy ny Antoko Kaominista Shinoa ny vaovao ety anaty aterneto ary ny fomba hakan'izy ireo lesona avy amin'ny zava-nitranga tsirairay mba hanatsarany ny fanefen'izy ireo hevitra.
Azon'ny rehetra alaina anaty aterneto ny karazana tatitra faharoa. Ohatra, manana anjara ao amin'ny Yuqing  (hevitry ny daholobe) ny people.cn, manana fifandraisana amin'ny antoko ary ny ankamaroan'ny tatitra ao dia nosoratan'ireo mpandalina ny hevitry ny daholobe avokoa izay mampiasa fandalinana angon-drakitra midadasika be, mandinika ny fanehoankevitry ny daholobe, na izany eny anatin'ireo mahazatra, na anaty aterneto ary manolotra fanatsarana ny politika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/23/140186/
 fanohanana ara-bola fihetsiketsehana: http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2015/04/21/outspoken-chinese-businessman-reappears-after-long-hiatus/
 ilay tatitra momba ny ezaka fanefena ny hevitry ny daholobe tao amin'ny Akademia Yenching: https://globalvoices.org/2014/08/25/leaked-documents-reveal-how-the-chinese-communist-party-channels-public-opinion/